जीटीए थन्काएर आन्दोलनमा आउ म पार्टी खोल्दिन, तिम्रो पछि लाग्ने छु - डा. छेत्री - वीर गोरखा
Home / GTA / harka bahadur chhetri / kalimpong / Nepali News / कालिम्पोंग / गोरखालैंड / नेपाली भाषा / जीटीए थन्काएर आन्दोलनमा आउ म पार्टी खोल्दिन, तिम्रो पछि लाग्ने छु - डा. छेत्री
जीटीए थन्काएर आन्दोलनमा आउ म पार्टी खोल्दिन, तिम्रो पछि लाग्ने छु - डा. छेत्री
दीपक राई Friday, January 15, 2016 GTA, harka bahadur chhetri, kalimpong, Nepali News, कालिम्पोंग, गोरखालैंड, नेपाली भाषा
कालेबुङ। विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्री, प्रो महेन्द्र पी लामा, अधिवक्ता अनमोल प्रसाद, अमर माला अनि युसूफ सिमिकको नाम उल्लेख गर्दै आज कालेबुङ शहरमा जनता ब्राण्डको पोस्टर देखा परेको छ। उक्त नेतृत्वहरुले गोर्खाल्याण्डको विरोद गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई राज्य सरकारको दलालको सँज्ञा दिँदै शहरको विभिन्न स्थानहरुमा व्याप्क रुपमा पोस्टरिङहरु देखा परेको छ। यस प्रकारको पोस्टर केवल कालेबुङ शहरमा मात्र नभएर राजमार्ग 10 धेरैवटा स्थानहरुमा पनि देख्न पाइन्छ। विशेष गरी राजमार्गको मल्ली क्षेत्रमा यस प्रकारको पोस्टरको व्यापक चर्चा छ। यसैले राजमार्ग भएर नै कालेबुङ फर्किने क्रममा विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले आफूहरुको विरोधमा देखा परेको पोस्टरिङहरुको कड़ा रुपमा खण्डन गरे।
पोस्टरिङबारे प्रश्न गर्नसाथ विधायक छेत्रीले भने - साथीहरुकोमा आफ्नो दलको नाम लेख्ने समेत आँट छैन। पोस्टरहरु देखेर मलाई साह्रै खुशी लाग्यो। खुशी यस कारण कि जतीबेला एउटा राजनीतिक दलसँग वास्तविक मुद्दाको अभाव हुन्छ। जब उनीहरु एउटा नयाँ सङ्गठनसँग डराई रहेको हुन्छ। उनीहरुकोमा तर्कसङ्गत ढंगले सामना गर्नु नसकिरहेको अवस्थामा नै जनताको नाम प्रयोगमा ल्याइन्छ। आफूहरुको विरोधमा देखा परेको पोस्टरहरुको गुणवक्ताबारे बोल्दै उनले भने - हाम्रो जनता यती साह्रो धनी पनि छैन। कि त्यती राम्रो कागजमा बजार भरि पोस्टर टालोस। पानी नपाउँदा चुपचाप बस्ने जनता, हठात गोर्खाल्याण्डको निम्ति भनेर यसरी पोस्टर निकाल्यो, यसमा मोर्चाको साथीहरुको सातो गएको हो। यो कुरा लाटाले पनि बुझ्छ जनता भन्ने कही पनि छैन।
साच्चो जनताको पोस्टर केही दिनमा बजारमा निस्कने बताउँदै उनले पोस्टरको जवाब पोस्टर मार्फत नै दिने मनाशय प्रकट गरे। उनले भने - खुशीको कुरा हो। अब मोर्चाले आफ्नो नाम पनि प्रयोग गर्न डराउ थाल्यो। आफ्नो नाममा पोस्टर गर्नु सक्थ्यो, सभा गर्नु सक्थ्यो। पत्रकारसम्मेलन गर्न सक्थ्यो। तर, जनताको सामु आउने स्वासको अभावको कारण उनीहरुले जनताको ब्राण्ड चलाउन थाल्यो। यस प्रकारको घटनाहरुले मोर्चाको कमजोड़ी स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले बैचारिक रुपमा पनि मोर्चा कमजोड़ बनिरहेको बताए। हामी आफ्नै नाममा पोस्टर गर्छौ। हालसम्म पनि आफूहरुले डीडीसीको ब्यानरमा नै काम गरिरहेको बताउँदै उनले भने - सबैलाई थाहा छ, राती आएर, चार जना व्यक्तिलाई बङ्गालको दलाल भन्ने काम कसले गर्छ।
मोर्चाले नै बङ्गालको व्यवस्था चलाइरहेको बताउँदै उनले राज्यबाट प्राप्त हुने जम्मै प्रकारको सुविधाहरु मोर्चाले नै उपभोग गरिरहेको बताए। उनले भने - मोर्चाका साथीहरु साचो रुपले गोर्खाल्याण्डको पक्षधर हुन् भने जीटीए बुझाएर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा आउन्। भोलिनै जीटीए थन्काएर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा उत्र हर्कबहादुरले पार्टी खोल्दैन, हर्कबहादुर तिम्रो पछि हिड्छ। मोर्चाको राजनीतिक चलखेलदेखि दार्जीलिङ पहाड़को जनतासमेत सचेत रहेको बताउँदै उनले मोर्चा नेतृत्वहरु चौकीको प्रलोभनमा रहेको बताए। उनले भने - दुइ-दुइ खेप जीटीएको सपत ग्रहण गर्नेहरुले गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्नु स्वाउँदैन। पत्रकारसम्मेलनमा डा. छेत्रीले बारम्बार दोहोराइरहे - जीटीए थन्काएर आन्दोलनमा आउ म पार्टी खोल्दिन, तिम्रो पछि लाग्ने छु।